छक्का पन्जा ३ प्रति दर्शकमा उत्साह किन ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentछक्का पन्जा ३ प्रति दर्शकमा उत्साह किन ?
October 9, 2018 Tulasa Karki Entertainment, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – यो भन्नु मुर्खता हुनेछ कि, बर्षमा रिलिज भएका सबै सिनेमा चल्नुपर्छ । किनकी, नेपाली सिनेमाको बजार, दर्शकको संख्यालाई हेर्दा बर्षमा रिलिज हुने सबै सिनेमा चल्दैनन् । वितरक सुनिल मानन्धरले भनेजस्तै ९० प्रतिशत सिनेमा असफल, ५ प्रतिशत हिट मात्र हुन् । अरुले किन चलेन भनेर समिक्षा गर्दै अर्को सिनेमा बनाउँदा राम्रो होला ।
कैयौ निर्मातालाई सिनेमा चलेन भनेर पिरलो हँुदै गर्दा, छक्का पन्जा ३ का निर्मातालाई भने अर्कै पिरलो छ । उनीहरुलाई सिनेमाले लगानी उठाउला कि नउठाउला भन्दा पनि कति कमाउला र आफूले नै बनाएको अघिल्लो रेकर्ड तोड्न सकिएला कि नसकिएला भन्ने पिर छ ।
यो सिनेमा घटस्थापनाको दिनबाट रिलिज हुँदैछ । मल्टिप्लेक्समा बुकिङ खुलिसकेको छ । काठमाण्डौको क्यूएफएक्सले मात्र ५ वटा हलमा ३० शोज दिएको छ । यो अहिलेसम्मकै नेपाली फिल्मलाई दिइएको उच्च शोज हो । राजधानी बाहिर मात्र १ सय भन्दा बढी हलमा सिनेमा चल्ने निर्माता दिपकराज गिरीले बताएका छन् । राजधानीका सबै हलमा उच्च शोज पाउँदै सिनेमा चल्दैछ । यो सबै हेर्दा छक्का पन्जा ३ ले दशैं ल्यायो कि दशैंले छक्का पन्जा ३ ल्यायो भन्ने छुट्याउन मुश्किल छ ।
राजधानीको सिभिल मलको ७ शोज चाडै भरिने क्रममा छ । ललितपुरको लबिम मलमा पनि हाल उस्तै छ । ८ शो चाडै भरिदैछ । कुमारी हलको ५ शो पनि भोलीका लागि चाडै नै भरिने क्रममा छ । बीग मुभिजको १० शोज, क्यूजको ११ शोज, एफक्यूबको ११ शोज, वीएसआरको १२ शोज सबै आजै भरिए भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।आखिर, छक्का पन्जा ३ प्रति दर्शकको उत्साह किन होला ?
नेपालमा अहिले जुन सिनेमामा पनि कमेडी हुन्छ । तर, कमेडीको सुरुवात फिल्ममा दिपक र दीपाको टिमले गरेको हो । यही भएर दर्शक यो ब्यानरमा बढी विश्वास गर्छन् । साथै, अघिल्ला फिल्मको व्यापार र दर्शकको विश्वासले गर्दा पनि सिनेमाप्रति दर्शकको उत्साह छ । अरु सिनेमा के हुन्छ थाहा हुँदैन, छक्का पन्जा दिपक र दीपा अनी उनको टिमका लागि पैसा छाप्ने मेसिन नै बनेको छ ।
यसपटक दिपक र दीपाले कन्टेन्टमा पनि ध्यान दिएको बताएका छन् । विद्यालयको कथालाई दर्शकले मन पराएपनि तिहारसम्म यो सिनेमाले अरुलाई आउन दिदैन भन्दा पनि हुन्छ । छक्का पन्जा ३ को आक्रामक बुकिङ, दर्शक र हलको विश्वासले फेरि नेपाली फिल्ममा साच्चिकै दशै आएको महशुश हुँदैछ ।
Buddhi Tamang Chhulthim
दु:खद खबर : रहेनन् चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष राम केशर बोगटी
September 27, 2017 sutraentertainment Entertainment, Kollywood, News, Videos 0
काठमाडौँ : बिजया दशमीको सप्तमीको दिन पारेर देश भर प्रदर्शनमा आएको सर्बाधिक चर्चा तथा बहु प्रतिक्षित चलचित्र छक्का पन्जा २ को ओपनिङ बम्पर भएको छ । मुलुक भरको सम्पूर्ण सिनेमा घरहरु हाउस फुल भएका छन भने अग्रिम […]
September 27, 2017 sutraentertainment Entertainment, Interview, Kollywood, Videos 0
काठमाडौँ : सर्बाधिक चर्चामा रहेका जोडी दिपक राज गिरि र दिपा श्री निरौलाले एक अन्तर्वार्तामा एकले अर्कालाई आफै प्रश्न गर्दै आफ्नो भित्रि कुरा अनि आफ्नो पोल आफै खोलेका छन l दिपक- दीपाको बहु प्रतिक्षित चलचित्र […]